ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကိုလံဘီယာ, Charleston, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, SC
သငျသညျကိုလံဘီယာ မှစ. သို့မဟုတ်စေရန်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုများအတွက်ရှာဖွေနေပါသည်, Charleston, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, စီးပွားရေးအဘို့အတောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားဧရိယာ, အရေးပေါ်အခြေအနေ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖော်ရွေလေယာဉ်နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှစ်သက်?call 1-888-702-9646 သင်သည်သင်၏လာမည့်ခရီးလမ်းဆုံးရအကောင်းဆုံးအလေယာဉ်ကုမ္ပဏီအကူအညီမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူစို့!
ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှု vs. First Class ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လေကြောင်းလိုင်း Fly
သငျသညျတောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုငှားရမ်းလျှင်အချိန်အတိတ်ကအရာတစုံတခုရှိနိုင်ပါသည်စောင့်ဆိုင်း. ပျမ်းမျှချောင်းမြောင်းအချိန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်4သို့6မိနစ္မ်ား. လှညျးစစ်ဆေးမှုများမှာရှည်လျားသောလိုင်းများရှောင်ရှားနေစဉ်သင်သည်သင်၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုစတင်, လက်မှတ်အရောင်း, သင့်ရဲ့လေယာဉ်လုံခြုံရေးနှင့် boarding.
သငျသညျတောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားဧရိယာ '' ကနေသို့မဟုတ် Empty ခြေထောက်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေမယ်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်များ၏ဗလာပြန်လာလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်လေကြောင်းလိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနေတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်.
တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနားထဲမှာ chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အောက်တွင်သင့်အနီးဆုံးမြို့ထုတ်စစ်ဆေး.
Aiken, SC ငန်း Creek အဘိဓါန်, SC တောင်ပေါ်ကသာယာသော, SC Spartanburg, SC
အန်ဒါဆင် ဂရင်းဗိုင်း မုရတုသဲသောင်ပြင်, SC St Andrews
Charleston, SC Greenwood, SC North Augusta, SC Summerville က, SC
ကိုလံဘီယာ, SC Greer မြောက်အမေရိက Charleston, SC Sumter, SC
ဖလော ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်း, SC ရော့ခ်ဂီတဟေးလ်, SC Wade Hampton
လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သင်ဟာအတွက်ပျံသန်းနိုင်သည်လေဆိပ် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံအဘို့သင့်အနီးဆုံးမြို့ထုတ်စစ်ဆေး & ကိုလံဘီယာထဲက, Charleston, တောင်ပေါ်ကသာယာသော, တောင်ပိုင်းကယ်ရိုလိုင်းနား SC အတွက် chartering ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေယာဉ်ပျံပေါ်.
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဝန်ဆောင်မှု - မူလတန်းလေဆိပ်
Charleston CHS CHS KCHS Charleston အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် / Charleston လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို P-S က 1,669,988
ကိုလံဘီယာ CAE CAE KCAE ကိုလံဘီယာမြို့တော်လေဆိပ်သို့ P-S က 533,575
ဖလော FLO FLO KFLO Florence ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် P-N ကို 52,611
ဂရင်းဗိုင်း GSP စနစ် GSP စနစ် KGSP ဂရင်းဗိုင်း-Spartanburg အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် (ရော်ဂျာ Milliken ဖျော်ဖြေမှု) P-S က 955,097
ဟီလ်တန်ဌာနမှူးကျွန်း HXD HHH KHXD ဟီလ်တန်ဌာနမှူးလေဆိပ် P-N ကို 78,342
မုရတုသဲသောင်ပြင် MYR MYR KMYR မုရတုသဲသောင်ပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် P-S က 899,859
ကိုလံဘီယာ ပြို ပြို KCUB ဂျင်မ် Hamilton က - L.B. Owen လေဆိပ် (ကိုလံဘီယာ Owen Downtown ခဲ့သည်) R ကို 0
ရော့ခ်ဂီတဟေးလ် UZA သိမ်းဆည်းထားပါ ပါလိမ့်မယ် ရော့ခ်ဂီတဟေးလ် / York ကကောင်တီလေဆိပ် (Bryant ဖျော်ဖြေမှု) R ကို 24
Aiken အိုက် အိုက် အားလုံး Aiken စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 8,596
Allendale 88J ကို Allendale ကောင်တီလေဆိပ် GA
အန်ဒါဆင် AND AND အမှု Anderson ကဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 111
Andrews က PHH ADR KPHH ရောဘတ်က F. Swinnie လေဆိပ် GA
Bamberg 99N ကို Bamberg ကောင်တီလေဆိပ် GA
Barnwell BNL BNL KBNL Barnwell ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Barnwell ကောင်တီလေဆိပ်ခဲ့သည်) GA
Beaufort ARW BFT KARW Beaufort ကောင်တီလေဆိပ် GA 1,301
Bennettsville ဂျီဒီပီ BTN KBBP မာလ်ဘိုရိုကောင်တီ Jetport (သူ. Avent ဖျော်ဖြေမှု) GA
Bishopville 52J ကို Lee ကကောင်တီလေဆိပ် (ထောပတ်ဖျော်ဖြေမှု) GA
ကန်ဒန်း CDN CDN KCDN Woodward ဖျော်ဖြေမှု GA 0
Charleston JZI KJZI Charleston အလုပ်အမှုဆောင်လေဆိပ် GA 57
Cheraw CQW HCW KCQW Cheraw စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (Lynch Bellinger ဖျော်ဖြေမှု) GA
Chester DCM KDCM Chester Catawba အဘိဓါန်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA
Clemson ကျဲအို ကျဲအို KCEU Oconee ကောင်တီဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 26
Conway HYW KHYW Conway-Horry ကောင်တီလေဆိပ် GA 4
Darlington UDG Kudg Darlington ကောင်တီ Jetport GA
Dillon DLC DLL KDLC Dillon ကောင်တီလေဆိပ် GA
ဂျော့တောင်း GGE GGE KGGE ဂျော့တောင်းကောင်တီလေဆိပ် GA 6
ဂရင်းဗိုင်း GMU GMU KGMU ဂရင်းဗိုင်း Downtown လေဆိပ် GA 44
ဂရင်းဗိုင်း GYH GDC KGYH Donaldson Center ကလေဆိပ် GA 234
Greenwood GRD GRD Kgrd Greenwood ကောင်တီလေဆိပ် GA 2
Hartsville HVS HVS KHVS Hartsville ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA
Kingstree CKI KCKI Williamsburg ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA
Lancaster LKR KLKR Lancaster ကောင်တီလေဆိပ် (McWhirter ဖျော်ဖြေမှု) GA
Lauren LUX KLUX Lauren ကောင်တီလေဆိပ် GA
ရီ 5J9 အမွှာစီးတီးလေဆိပ် GA
Manning MNI ကီလိုမီတာ Santee Cooper ကဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA
မာရီယန် Mao KMAO မာရီယန်ကောင်တီလေဆိပ် GA
Moncks ထောင့် MKS KMKS ဘာကလေကောင်တီလေဆိပ် GA 3
တောင်ပေါ်ကသာယာသော LRO KLRO တောင်ပေါ်ကသာယာသောဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် (Faison ဖျော်ဖြေမှု) GA
Newberry EOE ဤအတောအတွင်း Newberry ကောင်တီလေဆိပ် GA
မြောက်အမေရိကမုရတုသဲသောင်ပြင် CRE CRE Kkre ဂရန်းကမ်းနားလမ်းလေဆိပ် GA 36
Orangeburg လက်နက်ချရေး လက်နက်ချရေး KOGB Orangeburg စည်ပင်သာယာလေဆိပ် GA 2
Pageland PYG KPYG Pageland လေဆိပ် GA
Pelion 6J0 Pelion မှာ Lexington ကောင်တီလေဆိပ် GA
Pickens LQK LQK KLQK Pickens ကောင်တီလေဆိပ် GA 1
Ridgeland 3J1 Ridgeland လေဆိပ် GA
Saluda 6J4 Saluda ကောင်တီလေဆိပ် GA
Spartanburg SPA ကုမ္ပဏီ SPA ကုမ္ပဏီ Kspa Spartanburg Downtown သတိရအောက်မေ့လေဆိပ် GA 7
စိန့်. ဂျော့ခ်ျ 6J2 စိန့်. ဂျော့ခ်ျလေဆိပ်မှ GA
Summerville က နက်သော လျှင် Summerville ကလေဆိပ် GA
Sumter စာတို ငှေပေါငျး KSMS Sumter လေဆိပ် GA
ပြည်ထောင်စု 35တစ်ဦး ပြည်ထောင်စုကောင်တီလေဆိပ် (Troy Shelton ဖျော်ဖြေမှု) GA
Walterboro RBW RBW KRBW Lowcountry ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ် GA 11
Winnsboro FDW KFDW ဖဲရ်ဖီးလ်ကကောင်တီလေဆိပ် GA
Calhoun ရေတံခွန် 0A2 Hester သတိရအောက်မေ့လေဆိပ်
Clio 9W9 Clio သီးနှံစောင့်ရှောက်လေဆိပ်
Darlington 6J7 Branhams လေဆိပ်
Graniteville S17 အမွှာရအေိုငျမြားလေဆိပ်
အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ပြင် S79 အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ပြင်လေဆိပ်
Hampton 3J0 Hampton-Varnville လေဆိပ်
Hemingway 38J ကို Hemingway-Stuckey လေဆိပ်
Holly ဟေးလ် 5J5 Holly ဟေးလ်လေဆိပ်
Lake City, 51J ကို Lake City, စည်ပင်သာယာလေဆိပ် (C.J. အီဗန်ဖျော်ဖြေမှု)
Lancaster T73 Kirk ကလေတပ်အခြေစိုက်
Landrum 33တစ်ဦး Fairview လေဆိပ်
မက်ကော်မစ် S19 မက်ကော်မစ်ကောင်တီလေဆိပ်
Orangeburg 1DS အပူပိုင်းရွှံ့ညွန်ထဲကလေဆိပ်
Timmonsville 58J ကို Huggins သတိရအောက်မေ့လေဆိပ်
Trenton 6J6 Edgefield ကောင်တီလေဆိပ်
Beaufort အား NBC KNBC MCAS Beaufort (Merritt ဖျော်ဖြေမှု) 700
မွောကျ XNO KXNO မြောက်ကိုရီးယားလေတပ်အရန်ကွင်းဆင်း
Sumter SSC SSC KSSC Shaw ကလေတပ်အခြေစိုက်စခန်း 1,722
လမ်းကျဉ်း 43J ကို ယာဉ်ကြောလေဆိပ် (ပိတ်သိမ်း 1983) 
မြောက်အမေရိက Charleston NAS Charleston (ပြီးနောက်ပိတ်ထား ဒုတိယကမ္ဘာစစ်) 
Parris ကျွန်း စာမျက်နှာဖျော်ဖြေမှု (မရိန်းလေယာဉ်ကွင်း, 1950 ပိတ်ထား) 
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ဂျော်ဂျီယာငှား | ကော်ပိုရိတ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားကိုလံဘီယာ